4 1 intlungu uncedo nail okanye luxanduva na? icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname lipolysis vascular nokususwa 980nm diode icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname NJENGOKO-VL+-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
I-4 kwintlungu e-1 yokuphumla kwentlungu yokunyanga i-fungus laser lipolysis yokukhutshelwa kwemithambo ye-980nm diode laser AS-VL +
Amkela amandla ombane we-980nm diode laser ukunyanga ngomthambo, isikhunta sesikhonkwane, iintlungu namafutha. Iyaxhobisa nge-probe ezi-4 ezahlukeneyo zokususa imithambo, isikhunta sesikhonkwane, isiqabu seentlungu, i-laser lipolysis. Inkqubo yonyango ayibuhlungu, akukho gazi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
* Iinqanawa ezinkulu (iithambo zesigcawu, i-telangiectasia, irosacea), izilonda zamathambo
* I-Nail fungus
* I-lipolysis yeLaser
* Ukunyanga i-Laser kwintlungu yokunyanga umzimba
1. I-980nm laser yeyona nto ifunekayo yokufunxa iiseli zemithambo ye-porphyrin.
2. ukugxininiswa komsipha we-laser kububanzi be-0.2-0.5mm ububanzi, ngoko ke kugxininiswa ngakumbi kumandla ekufikeleleni kwizicubu ezijolisiweyo, ngelixa kuthintela ukutshisa izicubu zesikhumba ezijikelezileyo.
3. I-Laser inokunyusa ukukhula kwe-dermal collagen ngelixa unyango lwe-vascular, ukunyusa ubukhulu be-epidermal kunye nobunzima, ukuze imithambo yegazi emincinci ingatyhileki, ngexesha elifanayo, ulusu kunye nokuxhathisa kwesikhumba kuphuculwe kakhulu.
4. Inkqubo esekwe kumanyathelo atshisayo e-laser. I-transcutaneous iradiation (ngokungena ngaphakathi kwe-1 ukuya kwi-2 mm kwezicubu) ibangela ukufunxwa kwezicubu kukhethwe yi-hemoglobin (hemoglobin yeyona nto kujolise kuyo i-laser).
1. Izitya ezi-4 kwinkqubo 1 zifanela unyango lwokhuseleko lwe-laser oluninzi.
2. Unyango oluchanekileyo ngokujonga ukukhanya kunokuhlengahlengiswa
3. Ukukhutshwa kwamandla okuphezulu kwe-30W
4. Unyango olungenakrakra, ngaphandle kwentlungu, unyango olukhawulezileyo
5. Isikrini sokuchukumisa kombala wale mihla
6. Iyaqhubeka, i-pulse, iindlela ezizodwa zonyango
7. Ityala elikhanyayo lenaliti le-ABS enendawo yokugcina
I-anti-free membrane ye-antifreeze ye-gel pad yomatshini othambisa i-cryolipolysis cryo.